मलाई संगै बुडा हुदा मन लाग्दैन तर बुडा नभको बेला धेरै गर्न मन लाग्छ किन होला ! - Samachar Post Dainik
मलाई संगै बुडा हुदा मन लाग्दैन तर बुडा नभको बेला धेरै गर्न मन लाग्छ किन होला !
बुडा हुदा मन
लाग्दैन तर बुडा
नभको बेला धेरै
गर्न मन लाग्छ
काठमाडौ – एक श्रीमतीले आफ्ना प्रेमीसँग मिलेर श्रीमानकै जीवन लिएकी छिन् । यो घ’टनाको रहस्य पुलिसले सुल्झाएको छ ।
घ’टनामा संलग्न पत्नी सिमर कौरलाई पक्राउ गरिएको छ । उनका प्रेमी अझै पनि फरार रहेको बताइएको छ । आज तकको समाचारमा उल्लेख भएअनुसार घ’टना पंजाबको तरनतारन जिल्लाको पल्लासोर गाउँको हो ।
प्रकाशित मिति २७ आश्विन २०७८, बुधबार १३:५५